मन्त्रीले नै मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, यादवले दिए मुखभरीको जवाफ
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७५-२-१ गते | 57926 पटक हेरिएको
काठमाडौं। प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामलामन्त्री विजय यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माँग गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि भएको आलोचनाको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश नम्बर दुईका जनताको भावनाअनुसार भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसामु कुरा राख्दा विरोध गर्न नहुने बताए । “यहाँको समस्या र जनताको भावनाअनुसार मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभएको हो । जनताले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन् ।” यादवले भने ।
राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप विगारेर कार्यक्रममा राखिनु केन्द्र सरकारको गल्ती भएको यादवको जिकिर छ । “रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेले केका लागि हेलिकप्टर चढेर यहाँ आउनुभयो ? हामी त कोअर्डिनेशन गर्न मात्रै बसेका थियौँ । चारजना मन्त्रीहरु आएका थिए । झण्डा बिगारिएको किन देखेनन् ? केपी ओलीजीको जिम्मेवारी होइन ?” यादवले भने ।
प्रदेश नम्बर दुईको सरकारको पनि जिम्मेवारी भएको तर केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरु चलेकाले केन्द्र सरकाले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
“तीनवटै तहको सरकारको गल्ती हो ।” यादवले भने । सबै पक्षले जिम्मेवारी लिने हो भने प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत राजिनामा दिन तयार रहेको यादवको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री राउतको सम्बोधन गलत भए केन्द्र सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि राजिनामा दिनुपर्ने यादवको तर्क छ ।
“उहाँ पनि आउनुभएको थियो । उहाँले पनि राजिनामा दिनपर्छ । यो कुरा उठाउनुस् त । नैतिकताको आधारमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजिनामा दिनुपर्छ ।” उनले भने । भारतीय जनता पार्टीका सासंद कीर्ते आजादले जनकपुर भारतको हो भन्नु गलत भएको यादवले बताए ।